वाक्पद्घति "laurels कटनी": अर्थ र मूल
केही मानिसहरू कि ल्याटिन देखि अनुवाद जो योग्य पुरस्कार लागि सम्मानित गरिएको छ जो एक व्यक्ति अर्थ शब्द "विजेता", जस्तै "laurels संग पहनाया।" थाहा यस महान रूखको शाखा अक्सर मा उल्लेख शब्दहरू स्थिर संयोजन। उदाहरणका लागि, रूपमा एक यस्तो अभिव्यक्ति छ "को laurels कटनी गर्न।" यस लेखमा हामी, यो वाक्पद्घति छलफल हुनेछ यसको अर्थ, मूल कथा बाहिर आंकडा। पनि दिगो वाक्यांश को स्कोप याद गर्नुहोस्।
"Laurels कटनी गर्न": मूल्य
व्याख्यात्मक र वाक्यांशपुस्तकपट्टीसक्षम - विश्वसनीय स्रोतबाट गर्न अभिव्यक्ति पालो निर्धारण गर्न। Sergey Ivanovich Ozhegov निम्न विवरण दिन्छ: "। सफलता को फल आनन्द" उहाँले अभिव्यक्ति अक्सर व्यंग्यात्मक, एक लाक्षणिक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ भनेर टिप्पणी।
शब्दकोश Stepanovoy एम आई निम्न जानकारी दिन्छ: - "। सफलता को फल आनन्द" "laurels कटनी" अर्थ वाक्पद्घति
तसर्थ, हामी विचार गर्दै छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न एक स्थिर अभिव्यक्ति दुई भाषाविद् समान बताए छन्। यसलाई गरेको सफल काम को परिणाम फाइदाको रही हो।
तर यहाँ हुनुको laurels - रूख शाखा? किन तिनीहरूलाई reaping छन्? यो गोप्य हामी मिथक सँग सम्बन्धित एटिमोलजी phraseologism विचार जान्न।
त्यहाँ एक ग्रीक मिथक छ। परी Daphne परमेश्वर अपोलो को पत्नी बन्न चाहँदैनथे। तिनले उसलाई भागे र Laurel रूख मा गरियो।
यो अपोलो स्वामित्वमा थियो - कविता र कला को भगवान। यसलाई देखि Laurel माला को शाखा संगीत को विजेता, कविता प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कृत गरियो। पछि तिनीहरूले खेलाडीहरूलाई, सैन्य र अन्य वर्ण पहनाया। यस सन्दर्भमा, यस रूख एक सन्दर्भ सम्बन्धित विभिन्न अभिव्यक्ति थिए। उदाहरणका लागि, "को laurels कटनी गर्न।"
हामी देख्न सक्छौं रूपमा, वाक्पद्घति सदाबहार को शाखा को विजेता सम्मानित भन्ने तथ्यलाई आए। र लौरा किनभने ग्रीक मिथक को चुनिएको थियो।
कल्पना, छाप्न मिडिया शब्द को स्थिर संयोजन बिना कल्पना गर्न गाह्रो छ। मालिकको शब्दहरू idioms सक्रिय आफ्नो काममा प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले वर्ण, सुविधाहरू, केही व्यक्ति कार्यहरू वचनहरू समावेश पाठकहरूलाई हेडर को ध्यान आकर्षित जोड।
"जर्मन Chancellor को laurels कटनी गर्न छोडेनन्।": उदाहरणका लागि, वास्तवमा कारण, एंजेला Merkel नाम वर्ष को मानिस थियो, पत्रकार शीर्षकहरू संग लेख प्रकाशित गर्न थाले
तथापि, मात्र राजनीतिक सामाग्री मा यो विशेष अवधि। यसलाई सक्रिय विभिन्न पेशों को मान्छे को सफलता मनाउन गर्न प्रयोग गरिएको छ। उदाहरणका लागि, एक फिलिम Andreya Zvyagintseva "Leviathan" पत्रकार लेखे जो संग यस्तो "Leviathan" को रूपमा शीर्षक संग लेख को laurels कटनी जारी जडान मा आलोचकहरु एक सफलता र विभिन्न चाडहरूमा सिनेमा मा न्यायपीठ थियो। " यो, को पाठ्यक्रम, नयाँ पुरस्कार र पुरस्कार को अधिग्रहण चाहनुभएको।
यसलाई विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा र प्रतियोगिताहरु को विजेता थाह हुँदा, हामी अभिव्यक्ति पनि सक्रिय प्रयोग गरिन्छ विचार गर्दै छन्। यो आज सान्दर्भिक रहन्छ र अक्सर मिडिया मा प्रयोग गरिन्छ।
अंग्रेजी को ट्रान्सक्रिप्शन। अंग्रेजी - मा रूसी ट्रान्सक्रिप्शन
चिनियाँ भाषा को व्याकरण। यसको नींव र सुविधाहरू
एक अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम कसरी छनौट गर्ने?
कसरी राम्ररी लेख्न: ठीक वा ठीक?
"व्यापार कार्ड" रूस - Dymkovo खेलौना
एक पेशा रूपमा भन्सार एजेन्ट
एक समीक्षा: मिन्स्क मा कफी घरहरू
तरिकामा उत्पादन लागत कम गर्न
आवास सब्सिडी। सब्सिडी कसरी प्राप्त गर्ने? सेवाका लागि आवास भत्ता
विजेता मा मोम को संख्या को व्याख्या। मोममा भरोसा गर्दै: तथ्याङ्कहरूको अर्थ, प्रतीकको व्याख्या
किन ठूलो औंलाहरुमा चोट?
किन मुस्लिम प्रत्येक अन्य "DzhazakaLlahu Hairan" गर्न भन्छन्?
सांगीतिक हास्य थिएटर (नोवोसिबिर्स्क): मुग्ध पार्ने संगीतको, इतिहास, कम्पनी
मान्छे किन झूट हामी बुझ्न